blog .. blog .. blog | Sanchaung Journal
Post တစ်ခုကို ဖတ်ကြတဲ့ Unique Reader ကလည်း ၂၀၀-၃၀၀ လောက် ရှိနေပါပြီ။ ဒါ Google Analytics က ဇယား အရပါ။ Feed ကို Subscribe လုပ်တာကလည်း တစ်ရာနီးနီး ရှိပြီဆိုတော့ အမှန်အကန် ဖတ်တာ ၅၀ လောက်လို့ ပြောလို့ရမယ်။ အဲဒီတော့ စာဖတ်သူ ၂၀၀ – ၂၅၀လောက် ရှိပြီလို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ယူလိုက်ပါတယ်။ စာဖတ်သူ တစ်ယောက်က ပို့စ် တစ်ခုအတွက် တစ်မိနစ် အချိန်ပေးမယ်ဆို မိနစ် ၂၅၀ ကုန်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော် ကုန်သွားတဲ့ မိနစ် ၂၅၀ က အကျိုးရှိတဲ့ မိနစ် ၂၅၀ ဖြစ်သွားတဲ့ အတွက် ဘလော့ဂ်ရေးတာ အရင်းကြေမှတ်ကို ရောက်နေပြီလို့ ယူဆလိုက်တာပါ။
နောက်ပြီး မာတိကာလိုမျိုး ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ကလစ်လုပ်လို့ ရသမျှကို One click away မှာ ထားပေးထားပါတယ်။ ဆိုလိုတာက Drop Down list တွေ၊ Mouse တင်လိုက်မှ မြင်ရတာမျိုးတွေ မထားပဲ လင့်တွေ အားလုံး (ကိုယ့်ပို့စ်ေ ရာ၊ သူများပို့စ်ရော) အတွက် မြင်သာတဲ့ နေရာမှာ ထားပေးထားပါတယ်။ မအားမလပ်တဲ့ စာဖတ်သူတွေအတွက် ကလစ် တစ်ချက် လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ ဒီလို လုပ်တာဟာ အကောင်းဆုံးလို့ မဆိုလိုပါ။ မှန်တယ် မှန်တယ်နဲ့ ခင်ဗျားက ဘယ်ဘက်ကလည်း ဆိုသလို လူတိုင်းကတော့ သူဟာနဲ့ သူ မှန်နေတာပါပဲ။ ကျွန်တော် နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တချို့က ဘာလို့ တခြားနည်းနဲ့ လုပ်သလဲဆိုတာ။ ဥပမာ သူ့ ဘလော့ဂ်မှာ အမြင်ရှင်းချင်လို့လည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ အရမ်းကြီး Scroll မလုပ်ရအောင်လည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ ကိုယ့် အကြောင်းပြချက်နဲ့ ကိုယ်ပါ။ (ဟုတ်လား တီတီဂျစ် ? )။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် Tip တစ်ခုကတော့ သူများကို လင့်မယ်ဆိုရင် <a> Tag မှာ target=”_blank” ဆိုတာလည်း ထည့်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူများ ဘလော့ဂ်တွေကို လင့်ပေးထားလို့ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်ကနေ သွားလည်တောင် Windows အသစ် တစ်ခုအနေနဲ့ Tab အသစ် တစ်ခု အနေနဲ့ပဲ ပွင့်သွားပြီး ကိုယ့် ဘလော့ဂ်လေးက ပွင့်ရက်လေး ကျန်နေခဲ့လို့ စာဖတ်သူများ စိတ်လည်သေးမယ် ဆိုရင် ပြန်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Web Stat – 2008
ရေတက်တုန်း ခဏပေါ့ ငါးစင်ရိုင်းရယ်….
Previous Postအိမ်ထောင်ရေး (၃)မျိုးNext Postကျွန်တော် ချစ်သော ငုဝါ